TILMAAMAHA | RayHaber | raillynews
Daraasad Deg-deg ah ee Akkağ Ski Center
Iyada oo tilmaam ah Duqa Alanya Adem Murat Y roadcel, wadada aagga laga dhisayo Xarunta Akdağ Ski Center waxaa lagu furay shaqada kooxaha sayniska. Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiga iyo Turkey Ski shuqulkooda wadada [More ...]
Qiimaha Gawaarida Caruuta ee Ordu Boztepe ee Haweenka 8-da Maarso
ORBEL A.Ş., oo ah shirkad hoos timaad degmada Ordu Metropolitan Municipal. Marka la eego baaxadda bisha Maarso 8, Maalinta Haweenka Adduunka, sannadkan, waxay saxiixaysaa munaasabad kale. ORBEL A.Ş Haweenka qiimo dhimis gaar ah ku leh qiimaha gawaarida fiilada laga isticmaalo 8-da Maarso [More ...]
250 Shuhado Martida, Waxaan Hal Wadno Ahayd Erciyes
250 fanaaniin ah, oo isugu yimid Erciyes iyagoo xasuusinaya askarteenna ku shahiiday Idlib iyo dhammaan shahiiday, ayaa furay Calanka Turkiga oo ay ku xusayeen shahiidnimadaydii oo ay wehelinayeen Heesta Qaranka iyo salaadda. Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Mamduux [More ...]
Gawaarida Tünektepe Cable wuxuu aadaa Dayactirka dhameystiran
Antalya Metropolitan Municipal Tünektepe Cable Car iyo Xarumaha Bulshada waxay galayaan dayactir dhameystiran. Xaruntu ma awoodi doonto inay u adeegto 2 bil inta u dhexeysa 31 Maarso iyo 1ka Maarso. Mid ka mid ah calaamadaha lagu yaqaan Antalya iyo [More ...]
Isaga oo ka hadlayey kulanka Golaha SATSO, Madaxweynaha Akgün Altuğ wuxuu yidhi, “Waa inay noqotaa baabuur fiilo leh, laakiin waa inaan lagu dhisin waxyeelo dabiici ah. Waxaan ka soo horjeednaa burburinta dabeecadda. Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Sakarya Feebarwari Kulan Barlamaanka [More ...]
Xarunta Zigana Ski waxay ku taalaa xudduudka Tuulada Zigana ee degmada Torul, 40 kiiloomitir u jirta Gümüşhane iyo 3 km u jirta Zigana Pass. Meelaha loo dalxiis tago ee barafka ayaa ku yaal Gobolka Bari ee Badda Madoow ee Badda Madoow. warshad [More ...]
Waxay bilowday inay muujiso saameynta dabayl xoog badan ku leedahay Bursa. Uludağ, oo ka mid ah xarumaha muhiimka ah ee xilliga qaboobaha iyo dalxiiska dabeecadda, ayaa digniin la siiyay kuwa ku raaci doona baabuurka fiilada. Bursa oo leh awoodo sidda 140 kun oo rakaab ah saacaddii iyada oo ay saaran tahay 500 cabitaan [More ...]
Agaasinka Guud ee EGO wuxuu gaarsiin doonaa 2018 waxyaabood 437 shay oo ay ka illoobeen rakaabkii 186, halka waxyaabaha harsanna lagu iibin doono xaraash 21-ka Maarso. Waxyaabaha la iibin doono waxaa kamid ah laptop [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay leedahay nabad galyo qaboojiye leh xaflad lagu taageerayo dalxiiska jiilaalka. Xilliga qaboobaha ee 365 + 1 waa 29ka febraayo atdemiş Gölcük. In la taageero dalxiiska xilliga qaboobaha halka Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir ay dhaceyso nabad gelyo qaboobaha iyo xarunta [More ...]
Isuduwida Isuduwaha Maamulka Isparta, Kooxaha Isbarbardhiga Dabka ee Isparta, Kooxaha Caafimaadka ee Degmooyinka Caafimaadka Qaranka (UMKE), Masiibooyinka Gobollada iyo Kooxaha Agaasinka Degdega ah (AFAD), Gobalada Gobalada Raadinta iyo Samatabbixinta (JAK) iyo [More ...]
Giresun Warshadaha iyo Ganacsatada Ganacsiga (GISIAD) ayaa bilaabay shaqo ku saabsan gawaarida fiilada korantada iyo maraakiibta badda ee jasiiradda Giresun. Maamulka GİSİAD wuxuu booqday duqa magaalada Aytekin Şenlikoğlu iyo ugu yaraan 4 kun [More ...]
Kayseri Erciyes A.Ş. "Noqo Laqabasho Hada" tartamada lamaanaha, oo dhaqan ahaan ay kaqeybgalayaashu siinayeen ka qeybgalayaasha waqti farxad leh, ayaa lagu qaban doonaa marki lixaad oo ah Axadda, Feberaayo 23. Xilliga jiilaalka [More ...]
Degmada Kaymaklı waxay sii wadaysaa howlaheeda iyada oo la adeegsanaayo mabda'a degmada bulshada. Ajandaha Deegaanka ee Kaymaklı 21 Golaha Magaalada, Safarka Erciyes waxaa soo qaban qaabiyay Golaha Haweenka. In kasta oo ku dhawaad ​​boqol haween ah ay ka qaybgalaan safarka, gaadhiga fiilada leh iyo ciyaarta barafka ee Erciyes [More ...]
Qandaraaska mashruuca gaadhiga fiilada, kaas oo dadka reer Afyonkarahisar ay sugayeen, ayaa ugu dambeyntii la wareejiyay. Qandaraaska waxaa lagu qaban doonaa 4ta Maarso hoolka Golaha Dowlada Hoose ee Afyonkarahisar. Hal-xadhig laba-wado laba qol oo leh laba qol oo laga dhisi doono Castle Afyonkarahisar [More ...]
Duqa magaalada Kartepe Mustafa Kocaman wuxuu cadeeyay inuusan ka tanaasulin mashruucan gawaarida fiilada korontada laba miis oo kale ayaa miiska saaran. Wuxuu sheegay inuu raadinayo aabe yar mashruucan, kaasoo diyaar u noqon doona in la dhiibo 1 bil gudaheed. [More ...]
Laliska Xiriirka Caalamiga (FIVB) taariikhda by 12 ilaa 15 March 2020, markii ugu horeysay ee Kayseri Erciyes Ski Xarunta Turkiga ee marti ah marka hore abaabulan ee 2020 Snow Laliska World Tour uu noqon doonaa kulankii horumarinta ee Ankara ee [More ...]
Kooxaha Kalkaalinta Goobidda iyo Samatabbixinta had iyo jeer diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan jiga waaweyn Turkey ee ski. Kooxaha JAK, oo ka shaqeeya amniga dalxiisayaasha gudaha iyo dibedda ah, waxay qaataan 7 saacadood maalintii, 24 maalmood usbuucii. Goobidda iyo Samatabbixinta Gendarmerie [More ...]
Emergency Medicine Association of Turkey by Erciyes in Kayseri si loo abuuro wacyi ka dhanka Group Working Nature Medicine kuli lagu qabtay Tababarka Tababarayaasha. Khabiirka daawada deg-degga ah iyo aqoonyahanno ku takhasusay tababarka ayaa lagu qabtay Kayseri Erciyes Mountain [More ...]
Erciyes, oo soo jiidata dareen weyn oo ka timaada gudaha iyo dibadaba oo leh heerar caalami ah iyo tas-hiilaad heer caalami ah, ayaa marti-galiya dhacdooyin kala duwan toddobaad kasta. Erciyes A.Ş., oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri. Waxaa qoray Kayseri Ticaret [More ...]
Xarunta Denizli Ski Center, oo ay aasaastay Denizli Metropolitan Municipal si ay fikir uga hesho dalxiiska jiilaalka ee magaalada, waxay kordhisay xiisihii barafka. Xilligan, Denizli wuxuu aasaasay koox baraf ah oo leh 25 ciyaartooy oo shati haysta. [More ...]